Pro ကို iGun - အဆိုပါမူရင်းဂွန် App ကို APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » Pro ကို iGun - အဆိုပါမူရင်းဂွန် App ကို
Pro ကို iGun - အဆိုပါမူရင်းဂွန် App ကို APK ကို
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 55 သန်းကြိမ်ကျော်ဒေါင်းလုတ်လုပ်, iGun Pro ကိုအားလုံးအချိန်ထိပ် 500 ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဂိမ်း app များကိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရရှိနိုင်ပါနှင့်ပိုပြီးအပတ်စဉ်ကဆက်ပြောသည် 390 + လက်နက်များနှင့်အတူအကောင်းဆုံးသေနတ်ခြင်း simulation app ကိုဖွင့်ပိုကောင်းလာပြီစောင့်ရှောက် !!! အင်္ဂါရပ်များ:
မီး - interface ကိုသင်ယူဖို့လွယ်ကူသောနှင့်အတူရွေ့လျားမှုမှုန်ဝါးနှင့်မီးခိုးနှစ်ခုလုံးအပါအဝင်က Ultra-အတိုငျးသေနတ်ခြင်း simulation သင်၏စုဆောင်းမှုကိုစတင်အသုံးပြုဖို့လျင်မြန်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်ကုန်အံ့။
စုဆောင်း - ရုံကိုထိပုတ်ပါကွာ 390 သေနတ်များကျော်နှင့်အတူမည်သည့်မိုဘိုင်း platform ပေါ်တွင်မရရှိနိုင်အကြီးဆုံးစာကြည့်တိုက်!
Learn - iGun Pro ကိုကျန်တာတွေ, သမိုင်း, အသုံးပြုမှုနှင့် app ထဲမှာ featured အပေါငျးတို့သသေနတ်၏စာရင်းဇယားတစ်ခုအကြီးအကျယ်စာကြည့်တိုက်ရှိတယ်။
ဂွန်အမှတ်တရ - သင့်လမ်းရန်သင့်သေနတ်များပြသရန်,
အသားအရေ packages များနှင့်သင်၏လက်နက်များသင့်ကိုယ်ပိုင် Make
ချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်သေနတ်များ, သေနတ်နဲ့, လက်ဖြောင့်ရိုင်ဖယ်ဒုံးကျည်-propelled လက်ပစ်ဗုံး (RPG), စက်သေနတ်, Mini-သေနတ်နှင့်အထက်ရှေးဟောင်းသေနတ်အပါအဝင်လက်နက်များ၏ကျယ်ပြန့များ၏တိကျ, high-resolution ပုံတူ။
ကျနော်တို့အပါအဝင်ကျော် 390 သေနတ်များ၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးရှိ
- အ Minigun
- အ Gatling Gun
သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကနေသေနတ်မမြင်နိုင်သလား? သင့်ကိုအစဉ်လာမယ့်လိုချင်တာတွေများအတွက်နားထောင်ခြင်းသူ developer များ! Facebook.com/iGunPro မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့ပြန်ချက် Give
iGun Pro ကိုသှေးရောငျမွန်း Entertainment က LLC ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ iGun Pro ကိုလိုဂို, သှေးရောငျမွန်း Entertainment ကကို၎င်း, သှေးရောငျမွန်း Entertainment ကလိုဂိုအားလုံးသှေးရောငျမွန်း Entertainment က LLC ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြပြီးအကဲဆတ်သောကျမ်းစာ၌ရေးထားခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
iGun Pro ကိုရတာဟာမူရင်းဂွန် App ကို
55.50 ကို MB
ကတ္တီပါနီမွန်း Entertainment က LLC